China Hot Kutengesa Steam Hot Mvura Kudzosera Sterilizer Autoclave Mutengo WeKugadzira Chikafu Kugadzira uye Fekitori | Shenlong
Kupisa Kutengesa Steam Kupisa Mvura Kudzosera Sterilizer Autoclave Mutengo WeKugadzira Chikafu
Retort ndiyo michina inoshandiswa kutapudza yakaderera-asidhi chikafu chemumagaba, tembiricha inopfuura 100 ℃ uye pasherufu hupenyu hwave pamusoro pemwedzi mitanhatu. tembiricha yekudzorera uye nguva yakatarwa zvinoenderana nechigadzirwa chako.
1.Redu kudzosera zvinhu: shandisa SS304 kana 316, kudzosera flanges nemisoro yataishandisa ndiyo yepamusoro mhando muChina.
2.Control system: SIEMENS inodzora sisitimu inovimbisa kuti vatengi vanogona nenguva kuwana cheni yekupa munyika kudzikisa nguva yekuzorora.
3.Retort chengetedzo chengetedzo: kana kudzosera musuwo usina kuvharwa, hakutange kuita; musuwo haugone kuvhurwa kana paine kumanikidza kudzosera mukati; yakagadzirirwa nevhavhavha yekuchengetedza kudzivirira iyo ultrahigh kudzora kumanikidza.
4. Zvishandiso zvedu zvinomhanya zvakanaka kudzivisa ruzha rukuru
mvura yekupfapfaidza kudzora ndeyekusasa mvura muchigadzirwa, kazhinji, mvura yekupfapfaidza yemvura ine chinodziisa kupisa kupatsanura mvura yemukati kudzora kubva kune hwemvura uye kutonhora mvura, kuvimbisa chigadzirwa hachina kusvibiswa.
Zvichienzaniswa neyakajairika kudzora, mvura yekupfapfaidza kudzora inoshandisa iyo shoma mvura uye chiutsi, inogona kuchengetedza simba
1. Dhigirii repamusoro rekushandisa. Iyo sterilization poto inotora gumi nemashanu pneumatic valves, uye maitiro ekuwedzera mvura, kugadzirisa mvura, kudziyisa, kuchengetedza kudziya, kutonhora, kumanikidza kudzora, uye kudhiraina zvese zvinodzorwa otomatiki. Iyo ine yekukanganisa kuongororwa basa uye inogona kuseta maitiro mafomula, matatu-nhanho kudziyisa, kupfava kutonhora, nezvimwe.
2. Yakanatswa mvura yekudzivirira mvura inotora yakaunganidzwa yemvura kuunganidzwa uye tekinoroji tekinoroji, hakuzove nekuyera muhari, uye pamusoro pechirongo chakachena, saka mutengo wekutenga yakanyoroveswa ekurapa mvura michina inogona kuchengetedzwa.
3. Kunze kwekudziya uye kutonhora, hapana kusvibiswa kwechipiri, kutenderera kwemvura kunopisa zvisina kunangana kana kutonhora kuburikidza neanopisa kupisa, hapana kusvibiswa kwechipiri, kunyanya kwakakodzera kutonhorera kwemvura yegungwa.
4. Inokodzera akasiyana siyana akasiyana mapakeji zvinhu. Sezvo mvura inotonhorera isingadururwi zvakananga muhari panguva yekutonhora, inotonhorera inotonhora inogona kutambirwa kurongedza kwemabhodhoro egirazi asina kusimba kudzivirira kuputsika kwebhodhoro kunokonzerwa nekunyanyisa tembiricha mutsauko. Ichi chimiro chakakodzerawo hove, dzakadai semaflams. Kana mutsauko we tembiricha wakanyanya kukura, kana musiyano we tembiricha wakanyanya, goko rinozotyoka
5. Yakanakisa kumanikidza kudzora, iyo yekudzvinyirira kumanikidza sisitimu inokodzera gasi-rine kurongedza kwakakosha kune iyo sterilization yegasi-iine kurongedza, kunyanya mune yekutonhora nhanho, iyo inoda kumanikidzwa kudzora. Iyo yekudzvanya sisitimu inogona kuenderera ichiongorora tembiricha uye kumanikidza mune yekugadzirisa tangi, uye kugadzirisa kumanikidza kuri mutangi kuti iite kuti ienderane neyakaomeserwa ari mupakeji. Mapakeji akazadzwa nemweya kana gasi pane chero muzana, kana mapakeji akavharidzirwa pasi pevhisi anogona kuiswa steril pasina kukonzera kukuvara kana deformation kune iyo package kana zvirimo.
6. Yakashongedzerwa nemidziyo mina yekuchengetedza chengetedzo. Chengetedzo vharafu, napedyo chinja, humburumbira, Chinyorwa kupindirana.
7. Yakakwana nzira yekubika. Ichi chishandiso chine mushumo wekukanganisa, sterilization yakazara mushumo, gwaro rekuchengetedza *, nezvimwe.
8. Wireless F kukosha bvunzo basa. Kugovera kwekupisa uye sterilization kusimba kunogona kuyerwa. 9.Midziyo mikuru yekudzora yehari yekudzivirira inotengeswa kunze kwenyika, mwero wekutadza wakaderera zvakanyanya, uye kuvimbika kwakakwirira. Iwe unofanirwa zvakare kuteerera paunosarudza yakakwira-tembiricha yekubika mabhegi.
isu takagamuchira yepamusoro yekutengesa tekinoroji, inovimbisa yedu yemuchina yekuisa chisimbiso
Zita: Bata Sreen
Isu taishandisa kunze kwenyika Nokia yekubata skrini uye ma module, kwete epamba Nokia yekubata skrini uye ma module
Zita: Anti-vibration mudziyo
Muchina wedu wakagadzirwa neAnti-vibration chishandiso kuchengetedza pombi.
* Kubvunza uye kubvunza kutsigira.
* Muenzaniso wekuyedza rutsigiro.
* Wona yedu Fekitori.
* Kudzidzira kuisa muchina, kudzidzisa mashandisiro emuchina.
* Mainjiniya anowanikwa ekushandira michina mhiri kwemakungwa.
Yedu yekuendesa package inokodzera kutumira mhiri kwemakungwa, muchina wedu wakagadzikwa mumidziyo uye zvikamu zvakazara mune yemapuranga kesi.
Pashure: Horizontal Retort Machine Nemvura Inokanganisa Maitiro Ekudzosera homwe
Otomatiki Yakazara-Mvura Kudzosera
Yakazara otomatiki Mvura Rotary Retort
Horizontal Mvura Mwaya Retort Autoclave
Semi-otomatiki Yese-Mvura Rotary Retort
Mvura Bhati Sterilizer Retort
Mvura Spray Rotary Pilot Retort YeRabhani
High Temperature otomatiki Sterilizer Retort Mi ...
otomatiki mvura inokonzeresa kutapudza kudzora ...
Steam mbereko Autoclave Retort ye sardin ...
Otomatiki mvura kunyudza autoclave kudzikisira kwe ...
Best-kutengesa Industrial Quality mapuraneti Cooki ...
Hot Kutengesa vezvokutengeserana chikafu retort sterilizer auto ...